Wararka - Miyaad kaqeyb gashay CMEF 2020?
HAIYAN KANGYUAN CUDURADA CAAFIMAAD CO., LTD.
Sahayda Ka Hortagga Cudurka
Miyaad kaqayb gashay CMEF 2020?
19/10/2020 wuxuu ahaa furitaankii weynaa ee Carwada Qalabka Caafimaadka Caalamiga ah ee 83aad ee Shiinaha (CMEF) iyo 30aad Qaybta Soo-saarista & Soo-Bandhigga Caalamiga (ICMD) ee Xarunta Carwadda Qaranka ee Shanghai.
Tiro aad u tiro badan oo ka mid ah shirkadaha wadaniga ah ee wanaagsan ayaa ka qayb qaatay labadan dhacdo ee aan hore loo arag.
Ka dib tobanaan sano oo raasamaal ah iyo roobab, CMEF & ICMD waxaa loo sameeyay horumarsi caalami ah oo heer caalami ah oo heer caalami ah oo daboolaya dhammaan silsiladaha warshadaha ee qalabka caafimaadka, isku dhafka tiknoolajiyada wax soo saarka, soosaarka cusub, ganacsiga soo iibsiga, iskaashiga cilmi baarista sayniska, iwm. soo bandhigida tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee ku saabsan soo saarista qalabka caafimaadka, iyo kobcinta isdhexgalka silsiladda guud ee qalabka caafimaadka.
Waxaa lagu soo waramayaa in bandhiga afarta maalmood socday uu lahaa sideed hoolal, oo baaxaddiisu dhantahay 220000 mitir murabac ah. The 60 shirarka tacliimeed iyo forumyada, in ka badan 300 hoggaamiyeyaasha warshadaha iyo in ka badan 1500 oo ah soosaaris cusub oo wax soo saar ah ayaa noo keenaya inaan aragno tikniyoolajiyadaha ugu dambeeya.
Hogaamiye ahaan warshadaha dawooyinka isticmaasha, shirkadeena Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd.
Waxay ku soo bandhigtay qolkeeda x38 Hall-ka 1.1 oo inta badan lagu soo bandhigay noocyo kala duwan oo ah tuubada kaadi-mareenka, hawo mareenka laryngeal, tubada endotracheal, tuubada caloosha, qalabka ka hortagga cudurrada faafa iyo alaabooyin kale.
Dhammaantood way horumariyeen oo ay soo saareen shirkadeena.
Waxaa jira qulqulatooyin isdaba joog ah oo iibsadayaasha / booqdayaasha ah kuwaas oo muujiyey xiisaha weyn ee alaabteenna una rajeynaya iskaashi.
Sanadkii 2020-kii cudurka faafa ee loo yaqaan 'Corvid-19' wuxuu adduunka u keenay dhibaato caalami ah, dhanka kalena wuxuu na keenay caqabado iyo fursado. Xubin kooxeed ka ah dagaalka ka dhanka ah cudurkan, Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. waa inuu noqdaa kii ugu horreeyay ee qaada culeyska cudurka, bixiyana taageero ku filan oo agab ah, xooga saaraya hal-abuurnimada iyo horumarka, kuna dadaala inuu wax badan ku kordhiyo. dagaalka lagula jiro faafa.
Mustaqbalka, Kangyuan ma iloobi doono ujeeddadiisii ​​hore, horay usii sii wad, sahamin jihada cusub ee hal-abuurka ee warshadaha qalabka caafimaadka ee Shiinaha, iyo inuu isbedel qoto dheer ku sameeyo warshadaha caafimaadka iyo caafimaadka.
Xusuusin diirran: sida ku xusan shuruudaha shaqada ee ka hortagga cudurrada faafa, intaan la gelin hoolka bandhigga, dhammaan martida waa inay xirtaan waji-duub, muujiyaan kaararka aqoonsiga ee ansaxa ah, iyo Sharcigooda Caafimaadka ee Shanghai oo lagu dabaqay Alipay ama WeChat.
Waqtiga boostada: Dec-09-2020
Wax soo saarkayada ugu muhiimsan waa: Silicone Foley Catheter, Laryngeal Mask Airway, Silicone Caloosha tube, Endotracheal Tube, iwm.
Cinwaanka: Wadada Songpodong, Magaalada Shendang, Haiyan, Zhejiang, Shiinaha
Telefoonka: 15825721708 / 0086-573-86725883 / 0086-573-86725885
soo saarida iyo Codsiga Daaweynta ee L ...
"Abuur koox iyada oo loo marayo Midnimada iyo Co ...
2021CMEF: Kangyuan wuxuu hagaajiyaa tayada nolosha ...
Maxay tahay sababta Kangyuan's Maaskarada Laryngeal Airway?
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.